सांसद राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङेले दिए सरकारलाइ यस्ताे चुनाैति | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सांसद राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङेले दिए सरकारलाइ यस्ताे चुनाैति
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७५, मंगलवार १६:१७ लेखक नेपाली जनता
पोखरा । सोमबार सपथ लिएका सांसद राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङे मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभामा आउँदा सबैको ध्यान उनीतिरै खिचियो । मनाङे संसद पुग्दा बदबलसहित पुगेका थिए र उनले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढेर आएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले यसबारेमा आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘यसबारे म पनि बुझ्दैछु । ठ्याक्कै थाहा भएन । मैले पनि कानुन हेर्नैपर्छ ।’ मंगलबार नै तनहुँबाट निर्वाचित सांसद रामबहादुर गुरुङ पर्यटक गाडीमा आएका थिए ।
वीरेन्द्र बने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज मलेसियाको अध्यक्ष
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी अन्तरगर्त अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज मलेसियाको दोश्रो अधिवेशनले वीरेन्द्र नेगीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमितीको चयन गरेको छ…
भिरबाट खसेर २ जनाको मृत्यु
गुल्मी । गुल्मीमा भिरबाट खसेर २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिका-१ थाममा ४३ वर्षीय वीरहादुर केसी र मदाने…
यार्साले बोकायो ऋणको भारी
यति वेला हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा संकलनको समय हो । यो जति महँगो छ, त्यसको संकलन पनि…
अस्पताल भन्यो गंगामायाको स्वास्थ्य गम्भीर, संबेदनशील हुन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । ३० दिनदेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य गम्भीर र स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई…
पुस १ देखि सडकमा सवारी गुड्न नपाउने
काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नहुने सार्वजनिक…
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेटे डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग भेट गरेका छन् ।
आइतबार साँझ त्रिवि शिक्षण…
‘नेपाली पोर्न स्टार’ अर्चना पनेरुका श्रीमान अश्लिल क्रियाकलाप गरेको आरोपमा पक्राउ !7views